မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XVIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XVIII	1
Posted by Kyaemon on Nov 3, 2016 in Business & Economics, Education, Think Different | 1 comment
Burglish ကစာလုံး “ကျ” တာကိုသီးခံပြီးဘတ်ပါ
တိုင်းပြည့်နဲ့ပြည်သူတွေက မစ်ဆုံလျှော်ကြေး ကိုထမ်းနေရမလား? ၎င်းအစား မစ်ဆုံမှလျှပ်စစ်စွမ်းအားနဲ့ကြွယ်ဝဖွံ့ဖြိုး ကြီးပွါးမလား?
အဖြေကရှင်းနေပါတယ်၊ https://www.gopetition.com/petitions/support-myitsone-construction-%E1%80%99%E1%80%85%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%80%E1%80%90%E1%80%86%E1%80%80%E1%80%9C%E1%80%95%E1%80%95.html ကျးဇူးပြု၍ပန်ကြားလွှာကိုထောက်ခံလက်မှတ်ထိုးပေးပါ၊ပြီးတော့အများထိုးနိုင်ဘို့ဝိုင်းဖြန့်ပေးပါ
Target:Myitsone Commission in MyanmarRegion:
ဧရာဝတီကိုကာကွယ်ပါ ဆိုပြီးရေကာတာကိုရပ်ခိုင်းတယ်၊ လုပ်လက်စ ကုန်ကျစရိတ် $ သန်း ၁၀၀၀ လျှော်ကြေးကိုတော့
တာဝန်မဲ့စွာ ထဲ့မတွက်ပါ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့မရှီမဲ့ရှိမဲ့ဘဏ္ဋာငွေတွေကို
မြစ်ကို ကာကွယ်ရလောက်အောင် ရေကာတာ ပုံတွေကြည့်ပါ၊ ICOLD ရေကာတာအသင်းကြီးကိုမေးပါအုန်း၊ရေတွေတွင်တွင်ကြီးစီး
ဆင်းနေပါတယ်၊ ရေကာတာ ဆက်လုပ်ခြင်းဖြင့် $ သန်း ၁၀၀၀ အလျှော်သက်သာမယ်၊ နှစ်စဉ် $ သန်း ၅၀၀ လဲ ရမယ်၊
ဒီနေရာမှာလဲ “Like ကြိုက်” ပုံကို clickနှိပ်ပေးကြပါ